Wararka Maanta: Talaado, Sept 4 , 2018-Shirka golaha iskaashiga dowlad-gobolleedyada oo goor dhow Kismaayo ka furmaya
Wararka Maanta- Talaado, Sept 4 , 2018
Shirkan oo uu marti geliyay madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa madaxda dowlad-gobolleedyada waxaa ay sheegeen in shirkan looga arrinsasanayo arrimaha masiiriga ah ee u gaarka ah, khuseeyana iskaashigooda iyo guud ahaan danta caam ka ah, sida uu Kismaayo ka sheegay madaxweynaha Puntland.
"Waxaan rabnaa inaan helno dowlad-gobolleedyo mid ah, hadafkooduna yahay Soomaalinimo, hirgeliyana nidaamka fadaraaliisamka." ayuu yiri madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Gaas oo sidoo kale ah guddoomiyaha golaha iskaashiga dowlad-gobolleedyada oo Axaddii wariyayaasha kula hadlay Kismaayo.
Hoggaamiyayaasha dowlad-gobolleedyada, waxaa kalo ay shirkooda ku raadinnayaan sidii guul waarta looga gaadhilahaa xal u helida wadashaqaynta, nabadaynta iyo taabegelinta federalism ee ka dhaxaysa dowlad-gobolleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, sida u sheegay sarkaal sare oo la hadlay Hiiraan Online.
Shirka waxaa ku waheliya golaha iskaashiga dowlad-gobolleedyada, xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,Michael Keating - isagoo jeedin doonna khudbad sharafeed, maaddaama muddo xiliyeedkii uu ka dhammaan doono dhawaan, sida ku cad war qoraal ah oo looga hadlay kulan uu Isniintii la qaatay Keating, madaxda dowlad-gobolleedyada.
9/4/2018 8:43 AM EST
Talaado, September, 04, 2018 (HOL)-Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI C/raxmaan Maxamed C/laahi Cirro ayaa sheegay in inta tabashooyinka jira sababi karaan amni daro hadii aan wax laga qaban, waxaanu xukuumada ugu ugu baaqay in ay arrimahaasi jira xalliyaan.